Umama Bear 's Den: "Ikhaya" kude neKhaya - ikamelo - I-Airbnb
Umama Bear 's Den: "Ikhaya" kude neKhaya - ikamelo
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Chiarastella
Siyakwamukela ekhaya lakho kude nasekhaya e-Rocky Mountain House.
- imizuzu engu-10 yokuhamba ukusuka edolobheni. Umzila wamakhilomitha angu-5 ngaphandle komnyango
- imizuzu engu-3 ushayela kusuka ekudleni nasezitolo zokudlela.
-15 min Crimson Lake (ukudoba nokuningi)
-Imizuzu engu-10 ukusuka e-Historic Site, indawo yokudlala igalofu noma imizila yokushushuluza eqhweni
Ikamelo elikhulu elinefenisha + ikhishi elincane, ukuze wenze ukudla kwakho futhi uphumule. Igumbi lokugezela langasese. Ukufinyelela egumbini lokuphumula elithokomele phansi (elihlanganyelwayo), i-Wi-fi, indawo yokupaka kanye nezindawo zokuwasha izingubo.
Umpheme omkhulu one-BBQ ukuze uphumule kuwo.
I-Mama Bear 's Den
Ikhaya lakho elikude nasekhaya! Woza futhi uhlale nathi izinsuku ezimbalwa noma ubone ukuthi siyayifanele yini i-HQ yakho ese-Rocky Mountain House! Jabulela ukunethezeka kwendawo yakho ngekamelo elikhulu, elinefenisha ephelele eligcwele ukukhanya kwemvelo endaweni enokuthula nenhle. Hamba edolobheni ngemizuzu engu-15, uhambe ngezinyawo emzileni wedolobha noma ugijigijime emfuleni. Pheka ukudla kwakho ekhishini elincane futhi uphumule endaweni yakho noma ucele ukudla okumnandi okwenziwe ekhaya ukuthi kuhlelwe kusengaphambili (@ imali eyengeziwe).
SingamaNtaliyane! Ukwenza ukuhlala kwakho nathi kube okokuzithokozisa okujabulisayo ukuze ukhumbule kuyinto eza kuqala kithi. Besilokhu siyi-Superhost ku-Airbnb iminyaka engaphezu kwengu-5 e-Italy futhi siyazi into noma emibili mayelana nokwenza indawo eyamukelayo yokuthi uzizwe usekhaya ngenkathi usohambweni noma usebenza ungekho ekhaya. Sinolwazi oluphelele ngendawo futhi singasikisela izinto ezimbalwa ongazenzela Umndeni wakho noma ukuze uphumule ngemva komsebenzi.
Kukhona ikamelo elilodwa kuphela elihlelwe ngombhede, kodwa omatilasi bezingane bayatholakala.
I-Wi-Fi esheshayo nenokwethenjelwa ifakiwe. Umshini wokuwasha nokomisa uyatholakala ezintweni zombhede nezimpahla zomuntu siqu. (Azikho izembozo noma izingubo zomsebenzi ezithe xaxa).
Ukubeka kalula: sihlala endaweni engcono kakhulu edolobheni! Sinepaki elimangalisayo ngaphandle nje komnyango futhi ukubukwa KWANSUKU ZONKE kwamagilebhisi KUQINISEKISIWE UNYAKA WONKE. Izingane zizohlala zithola umngane ozodlala naye epaki. Njengoba iseduze izikole, ithule futhi iphephile. Umkhawulo wejubane ngu-30km/h nxazonke kithi. Umzila wokuhamba wamakhilomitha angu-5 uphuma nje emnyango. Indawo engcono kakhulu yokuba e-Rocky. :-)
Siyathanda ukuhlangana nabantu abavela ezizindeni ezihlukahlukene zokuphila. Siyakuthanda ukuhamba ngokwethu futhi ikhaya lethu liyindawo ethandwayo yabangane ukuba bahlangane (ngaphambi kwe-covid ;-) - Uma ujabulela ukuba ngaphandle, sikwesekile njengoba sazi izindawo nezindlela ezinhle kakhulu zokuya nokudlala.
Ngenxa yezimo zethu, izivakashi azikwazi ukufinyelela ezindaweni eziphezulu, kuhlanganise nekhishi eliyinhloko negumbi lokuphumula elisophahleni.
Ikamelo lokuphumula elisezansi liyahlanganyelwa. Kunesikhala sesiteshi esisebenzayo.
Siyathanda ukuhlangana nabantu abavela ezizindeni ezihlukahlukene zokuphila. Siyakuthanda ukuhamba ngokwethu futhi ikhaya lethu liyindawo ethandwayo yabangane ukuba bahlangane (nga…